Nantsi imisebenzi yethu edwelwe kwindawo yephulo.
Izenzo ezifanelekileyo kufuneka zifumaneke.
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 11. January 2021
I-Buntesregierung yiprojekthi yobugcisa bePixelHELPER ejongana neengxaki ezibalulekileyo zentlalo ngezinye iindlela ngokumisela intsomi "Buntesministerien". Ewe kunjalo, iBuntesregierung ingenelela ngokwahlukileyo kwimicimbi yangoku kunokuba urhulumente wephondo esenza. Nayi ingxelo ka-Angela Merkel ngoJulian Assange.
Ezi mfuno zikarhulumente woburhulumente zinempembelelo kwilizwe liphela. Nantsi impendulo evela kuKumkanikazi kunye noBoris Johnson.
Amanye amazwe aphendula kwiimfuno zikaKhansela u-Angela Merkel ngedilesi yoNyaka oMtsha eyahlukileyo, apha evela eSwitzerland
Emva kuka-Angela Merkel, ukumkanikazi, uBoris Johnson kunye nomongameli welizwe laseSwitzerland, uDonald Trump naye kwafuneka athethe into malunga noku.
I- "Buntesministerium gegen Ukungabi namakhaya" yahambisa iifomsile ezibandayo zabangenamakhaya kwilungiselelo lobugcisa lika-Angela Merkel. Apha uya kufumana iividiyo ezimbini ezibonisa le misebenzi.
Ukutshintsha uluntu ukusuka kwindawo yokujonga ubugcisa, iPixelHELPER ifake iiprojekthi ezahlukeneyo "ezimibalabala":
Buntesrat, Buntespolizei, Buntes Ministry of Finance, Bunteskanzler, Buntesnachrichtendienst, Bunteskriminalamt, Buntestag, Buntespresseversammlung, Buntesamt ukukhusela umgaqo-siseko kunye neBunteswehr. Kunye namagcisa avela kwihlabathi liphela, amaphulo eprojekthi nganye ayapapashwa ngokuthe ngcembe.
Wamkelekile kwiBuntesregierung NgoJanuwari 11th, 2021Oliver Bienkowski
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 5. January 2021
Inkohliso enzulu: Ubuxoki bethemba elikhokelela kuguquko!
Inkohliso enzulu yindlela entsha yokuhlela ividiyo. Ukusuka kwilizwi elenziweyo ukulungelelanisa ukuhamba komlomo, sinokwenza nayiphi na ividiyo. Iinkokeli zikarhulumente ezingoozwilakhe zinikezela ngokurhoxa kwabo kwividiyo, iphelile imfazwe ende, kubhengezwe uguquko, enye idilesi yoNyaka oMtsha iyavela-amathuba okunikezelwa nzulu anzulu ngokungapheliyo. I-PixelHELPER ILabhoratri enzulu enkohliso sele ivelise iinyani ezahlukeneyo ezinzulu. Jonga ukhetho kule webhusayithi. Ukuba unayo nayiphi na imibuzo, nceda unxibelelane nathi ngale nombolo.
U-Angela Merkel ufuna uxolelo lukaJulian Assange kuKumkanikazi kunye noBoris Johnson
Ukumkanikazi kunye noBoris Johnson ngokuqinisekileyo basabela kwangoko.
UDonald Trump uxolela uJulian Assange no-Edward Snowden
U-Angela Merkel ufumene i-Federal Ministry yoMbala ngokuchasene nokungabinamakhaya
Ilabhoratri enzulu yamalungelo oluntu Matshi 26th, 2021Oliver Bienkowski
Siveze isoftware yethu yokuhambisa isoftware kwiTED Talk eMarrakech kwi2014. Ifama yindawo yokuqala esebenzayo apho sisebenzisa isoftware yethu. Sijonge phambili kubaxhasi abatsha kunye neendwendwe kwiprojekthi yethu.
Ngesonka esenziwe enkonxeni ngokuchasene nokunqongophala kokutya okubangelwa yimfazwe kunye notshintsho lwemozulu
Ukubona ukondla kwe-Instagram kufuneka wongeze eyakho i-API yeTokheni kwiphepha lokukhetha le-Instagram kwiplagi yethu.
Siveze isoftware yethu yokuhambisa izixhobo kwiTED Talk eMarrakech. Incoko ye-TED ngumsitho apho kunikwa iintetho zokubeka imeko kwizihloko ezisishukumisayo kwaye ziya kusihambisa kwixesha elizayo.
Inkampu yeembacu eMbera ziikhilomitha ezingama-2000 ukusuka kwikomkhulu lePixelHELPER elihlala ngqo. I-bakery yesonka sethu esenziwe enkonkxiweyo ivelisa isonka sobomi obude beenkampu zeembacu kunye neendawo zentlekele. I-spirulina algae eveliswe eMorocco kufuneka incede ngokuchasene nokungondleki kunye nokungondleki kwindawo yokugcina izinto. UW.Sifuna ukwakha indawo phambi kwekampu yababaleki kwaye sisebenzise i-svestream swarm incedisa isofthiwe yokunceda abantu. Kwinkampu yeembacu yeyona 4 sixeko sikhulu ka Mauritania, sifuna ukuqinisekisa ukuba ukubandezeleka iimbacu lemfazwe zinciphe.
IPixelHELPER idale indawo eyahlukileyo kwaye yazisa abaphulaphuli kwimveliso yezixhobo zoncedo eAfrika. Iityhubhu zikaxakeka ziza nengxowa yokulala, isitovu segesi, ikiti yoncedo lokuqala & amp; Isibane sixhotyiswe. Yonke into oyifunayo xa ulahlekelwe likhaya lakho emva kwentlekele yendalo.
Igama: Ukunyuswa koBugcisa neNkcubeko
Sakha imisebenzi kunye nethemba
Senze iziko apha ukukhawulezisa ukunceda abantu kwaye ulizise ngokukhawuleza kwindawo oya kuyo ngemoto, isikhongozeli solwandle okanye inqwelomoya. Apha kwisiza sinokwenza ngokulula yonke into efunwa ngabantu kwiinkampu zeembacu. Siza kumisa iqela lokuqala phambi kwenkampu ye-UNHCR eMauritania.
Isonka saseYurophu esenziwe ngeenkonkxa zoncedo olungxamisekileyo- uzinzo lokutya eAfrika NgoJanuwari 27th, 2021Oliver Bienkowski
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 17. January 2020
Ukuphela kweHong Kong njengoko uyazi
I-China ithatha amanyathelo asemthethweni okokuqala okoyisa i-Britain yangaphambili ye-colon. Ubunkokheli baseTshayina bavuselela intshukumo yoqhanqalazo kunye nokucela umngeni kwilizwe lasentshona.
ICongress yaBantu baseTshayina ipasisa umthetho wokhuselo #HongKong, ongcwaba "ilizwe elinye, iinkqubo ezimbini" kunye nedemokhrasi. Ukukhanya okuqikelelweyo kwiflegi yaseJamani #Bundestag #Bundesregierung & @HeikoMaas yamkela inkululeko yeHongKong. #HongKongNeedsHelp #HongKongProtests
Okokuqala ngqa oko kuqalile ubhubhani we-corona, amawaka abonakalisile eHong Kong ngokuchasene nefuthe lase China kwindawo ekhethekileyo yolawulo. Amapolisa asebenzisa igesi yokuhlamba iinyembezi, isitshizi sepepile kunye nemisinga yamanzi. Uninzi lwabanjwa.
Uqhanqalazo olwenziwe ngeCawa lwenziwa zizicwangciso zikaBeijing zomthetho wezokhuseleko ojolise ekuhlaseleni nasekwenzeni imisebenzi eyahlukeneyo e-Hong Kong. Ngaphandle kwezithintelo ekuhlanganisweni kwe-corona, amawaka athabatha ezitratweni kwiindawo zevenkile yaseCuseway Bay nase Wan Wani.
Abanye babambe izibhengezo ezazisithi, "Izulu liza kuyitshabalalisa Iqela lamaKomanisi laseTshayina". Kukwanokuphindelwa umnxeba kwinkululeko. Inani elikhulu lemikhosi yezokhuseleko yahamba nababonisi.
Uqhanqalazo luyaqhubeka ngokuhlwa. Amatshantliziyo aguqukayo aphosa iifestile zevenkile. Ngenxa yobhubhani we-corona, imigaqo yomgama evumela amaqela abantu abagqibeleleyo abantu abasibhozo afake isicelo kuqoqosho oluninzi olunabemi baseAsia kwezoqoqosho nakwezemali.
I-Britane yayiqeshise i-Hong Kong i-China iminyaka eyi-150, okokuqala yi-Hong Kong Island, kamva i-Kowloon kunye ne-New Territories. Isivumelwano siphelelwe lixesha nge-30 kaJuni. AmaBritane anikezela isithsaba sabo e-China.
Umguquleli waseTshayina uDeng Xiaoping (1904-1997) wasungula igama elithi "ilizwe elinye, iinkqubo ezimbini" kwasekuqaleni kweminyaka yee-1980 ukwenza ukubuyela kweHong Kong kube semthethweni. Iinkqubo ezimbini kwilizwe elinye zinokwenzeka kwaye zamkelekile, utshilo uDeng kwi1982. "Akufanele uyitshabalalise inkqubo kwilizwekazi, nathi akufuneki siyitshabalalise enye."
Ukuzimela kumkhankaso weHongKong / Anti China Juni 15th, 2020Oliver Bienkowski
Iibhiskithi eziBrown-kunzima ukugaya
NACH #PixelHELPER Yenza uphando kwi # Oovimba boRhulumente kufuneka #Wikipedia Inqaku nguHans #Bahlsen inokubhalwa kwakhona. Usebenze kubasebenzi abasebenza ngokuzimela besekela-general general command kwade kwangowe-1944. Kwakukho intsebenziswano yamaNazi #Zwangsarbeiter & Iifektri eUkraine #VerenaBahlsen
Njengoko umfanekiso-Iphepha-ndaba i-heiress yabuza malunga nalo, wasabela ngokungakhathali. “Akulunganga ukudibanisa intetho yam nayo,” utshilo-kwaye usenokuba ulungile kancinci malunga noku: ayilunganga ukuphosa le nto kumntu ofuna nje ukuthetha ngayo, njengabo Uqoqosho lunokuba "sisithuthi" "ukusiqhubela phambili siluluntu".
“Kwakungaphambi kwexesha lam kwaye sasihlawula abasebenzi ngokunyanzelekileyo njengamaJamani kwaye sibaphethe kakuhle. Inkundla yawagxotha la mabango. Namhlanje akusekho mabango nxamnye neBahlsen. UBahlsen wayengenatyala. "
... kwaye kunesibindi sokubanga ukuba uBahlsen "akanatyala lanto ingalunganga" ngenxa yokuba inkundla iyivulile inkampani ngomthetho wokuncitshiswa kolwaphulo-mthetho lwayo. awakwazi ukugweba, ...
Inkampani Bahlsen Ngokwengxelo ephume kwiphephandaba eliphuma kanye ngeveki iDie Zeit, abasebenzi bamakhoboka akhe ngexesha lamaNazi basenokuba babhatala imali encinci kunaleyo bebeyibanga. Eli phephandaba licaphula kuvavanyo lwamakhadi emivuzo yabenzi becookie ukusukela kwiminyaka yoo-XNUMX.
I-heiress yenkampani uVerena Bahlsen kutshanje wayenamaNazi ookhokho bakhe kunye nenkampani kwiphephandaba "Bild" downplayed. Sibahlawule abasebenzi abasebenza ngokufanayo namaJamani kwaye sabaphatha kakuhle, utshilo. Umntu oneminyaka eyi-26 sele exolisile ngokukhetha kwakhe amagama.
Abasebenzi abanyanzelekileyo basePoland naseUkraine kuthiwa bafumene phakathi kweempawu ezintlanu ukuya kwezilishumi ngeveki, ngokweNgxelo yeZeit. Elona candelo likhulu lomvuzo opheleleyo, owawuphakathi kwama-23 nama-29 Reichsmark, wawugcinwa: zerhafu kunye nemirhumo yokhuseleko kwezentlalo - apho aba bafazi bengazange bazuze khona-kodwa nakwizohlwayo kunye neendleko eziphezulu zokuhlala ngokunyanzelwa enkampini.
"Kutheni usapho lungakhumbula ngokwahlukileyo?"
Nangona kunjalo, ngokwengxelo, oku akunakuthelekiswa nentlawulo yabasebenzi baseJamani ngexesha lamaNazi, njengoko yayibizwa njalo ngokubhekisele kuVimba weArolsen eBad Arolsen. Isithethi se-archive sixelele i "Zeit": "Ngokophando lwembali, abasebenzi baseJamani bafumana umvuzo ophakathi we-44 Reichsmark."
der #Wehrmacht #Keks, i # Krümelmonster #VerenaBahlsen of Bahlsen kufuneka i-40% yeenkampani zakho kwizabelo #Konzentrationslager#Auschwitz ukunikezela. #OhneMampfkeinKampf & #ohneFeldpostkeineKampfmoralIsabelo sesinyithi se-Wehrmacht senza ukungqinga kunye neemfazwe zombane kunokwenzeka kwiMfazwe yesibini (II) yeHlabathi. Nikela ngokuqikelelwa kokukhanya ngokuchasene neBahlsen ukuya: paypal@pixelhelper.tv Der #Leibniz I-bhisikidi evela kwinkampani yaseVerena Bahlsen yayiyinxalenye yale nkqubo kunye nemigudu yokulwa nemfazwe. Ngaphandle kwakhe kuya kuba #Stalingrad iphelile ngaphambili. Inkampani iBafsen ihamba nayo #Temmlerukuba #Hitler Coke uye wakhiqiza, eninzi ukusola imfazwe yokubhujiswa #Nazis kwiReich yesithathu. Ukuba iBahlsen yahlawula i-1500 isinxephezelo se-€ kubasebenzi abaphoqelekileyo yintlanzi embi. U-Bahlsen wanikezela ngeemephu kunye neLeibniz Feldpost, isiseko sokunxibelelana kwangaphambili ngexesha leMfazwe Yehlabathi yokuqala. #Kriegspropaganda kuthetha namhlanje #Reklamekunst #DasOriginal# Nurechtmit52Zähnen #Vernichtungslager #eiserneRation #Hannover#Kriegstreiber Xa Allied aseMelika ukuhlaselwa abafazi izisebenzi bekulindeleke nje yokuhlala eyenziwe ngomthi, eli nani manenekazi emihle #Bahlsen babengenayo enye yabasebenzi bakho #Bunker kwakhiwa. Lapha kukhombisa umfanekiso ogqithisileyo wobukhulu-bhankqalazi #Nazi Umlandeli wosapho. Kungenxa yezo ntsapho kuphela apho amaNazi akwazi ukugcina inkqubo yabo yokugula konke konke. Masibonise uNks. Bahlsen ukuba siyamxolela; ukwenza oku, kuya kufuneka unikele nge-40% yezabelo zakho kwi #Auschwitz. Cela kuwe ngokwakho-ungayifumana apha kuFacebook: https://web.facebook.com/verena.bahlsen & I-Instagram @verenabahlsen
I-Oetker, iBahlsen & Co ziyahlaziya
Umsebenzi onyanzelweyo eBahlsen Oetker kunye naseK. KG Aprili 21st, 2020Oliver Bienkowski
I-Vogelschiss gegen Hass - ikhadi elibomvu labathumela intiyo
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 16. January 2013
Shit ubuyile namhlanje, phezu #Ixabiso ngoku kukho enye kumnatha Ikhubalo. @PixelHELPER uthumela ilindle leentaka kuye wonke umntu osasaza intiyo. Nikela ku-paypal@PixelHELPER.tv kwaye ubhalele kuthi ngubani omele afumane unikezelo olulandelayo. Unobumba 1 uya ku @_donalphonso kusuka kwi @world
I-Vogelschiss gegen Hass - ikhadi elibomvu labathumela intiyo Juni 15th, 2020Oliver Bienkowski
Imyuziyam kaSamuelPaty yeNkcubeko kunye neNkcubeko yeNkululeko
Iposi ekhuniweyo By Oliver Bienkowski On 10. Fe bruwari 2012
Biza ulwakhiwo lweMyuziyam yeNkolo yeSatire kunye neNkululeko yoBugcisa nguSamuel Paty
Ukubulawa kukaSamuel Paty akufuneki kulityalwe. Ubugcisa akufuneki bube sisizathu sokuba abagrogrisi babulale abanye abantu. Inkululeko yobugcisa ingaphezulu kwenkululeko yonqulo. Simema iiklasi zesikolo ezivela kulo lonke elaseYurophu ukuba zindwendwele umboniso wethu wesatire. Njengesekisi yanamhlanje yenkululeko yobugcisa, ngomboniso wethu siza kubonisa imvelaphi kwimbali yokuxubusha kwezenkolo kwiYurophu yonke iintsuku ezimbalwa. Sifuna uncedo lwakho ukuze sikwazi ukuthenga nokuxhobisa izikhongozeli zolwandle ngemiboniso yethu. Yonke iYurophu kufuneka ime kunye inkululeko yamazwi kunye nemifanekiso. Nceda uthumele iphulo lethu kubo bonke abahlobo kuwo onke amazwe aseYurophu ukuze sikwazi ukuqala ngokukhawuleza ngomboniso wethu wenkululeko wobugcisa. Wonke umntu onikelayo unokwamkelwa simahla kubomi bexesha elizayo kwiMyuziyam yoPopu yeNkolelo yeNkolo.
Ngemyuziyam yoPopu ohambahambayo siya kuhamba kuwo onke amazwe aseYurophu.
Isikhumbuzo sethu sokuBulawa kwabantu ngenkohlakalo eMorocco sachithwa, ingxelo ye-CNN
I-CNN malunga neprojekthi yethu eMorocco
Imyuziyam kaSamuelPaty yeNkcubeko kunye neNkcubeko yeNkululeko NgoFebruwari 24th, 2021Oliver Bienkowski